WOWOW Buuxiyaha Dheriga Dahabka ah ee Dahabka ah ee Dahabka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah lagu Ruxay
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada / WOWOW Buuxiyaha Dheriga Dahabka ah ee Dahabka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah lagu rusheeyey
Amazon USAmazon CA Amazon MX Tilmaamaha Rakibaadda PDF
[Daryeelka Caafimaadkaaga】 Walxaha naxaasta adag, aan miridhku ahayn, aan nabaadguurin. Tayada biyaha waxaa lagu dammaanad qaaday farsamo gaar ah oo looga hortagayo rasaasta iyo qolofaynta, taas oo faa'iido u leh qaab nololeed caafimaad leh. OGEYSIISTuubada dheriga buuxinta waxaa loogu talagalay isticmaalka biyaha qabow oo kaliya.
[Fududeynta noloshaadaQasabadda Buundada Darbiga Keliga ah ee ku jirta Laba-laab iyo naqshadda cududda luliddu way ka laaban kartaa marka aan la isticmaalin. Waxay keydisaa booska jikada waxayna ka dhigtaa karinta mid waxtar leh, nadaafad.
[Ha Jarin DhinacyadaFinish Dabaqad aad u fiican oo dhammeystiran oo dahab ah ayaa ka hortagaysa xoqidda iyo daxalka, ma fududa in la oksheeyo ama la libdho. Waxaa lagu qalabeeyay kaydiyaha biyaha badbaadiya ee NEOPERL, kaas oo bixiya qulqulka biyaha joogtada ah. Aerator-ka ABS ee cadaadiskiisu sarreeyo, daadinta oo aan dhibic lahayn.
[Waxyaabaha Premium】 Waxaan bixinnaa isku-xire naxaas lagu sameeyey oo kuu adeegi kara muddo dheer, ma fududa inaad jebiso (1/2 ”NPS ilaa 1/2” NPT). Dajinta daloolka daloolka keli ah, oo leh flange rakibidda xasilloonida. barkad firaaqo ah oo beddel ah ayaa sidoo kale lagu daray.
[Dammaanad, Taageerada MacmiilkaPac Xidhmo Wanaagsan oo leh Sanduuq iyo Isbuunyo Adag. WOWOW qasabadaha jikada waxaa daboolaya dammaanad xaddidan oo 5 sano ah, 90 maalmood oo soo noqosho xaddidan ah, iyo taageero macmiil oo waqtigeedii ku habboon.
WOWOW Dheriga Dahabka ah ee Buuxiyay Jikada Tubada Darbiga ee Dusha Sare
WOWOW Faleebada Dheriga Dheer ee Dahabka ah
Ku adkeyso bixinta qasabado tayo sare leh
Qalabka Naxaasan ee Premium
WOWOW qasabadaha buuxinta dheriyada waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo naxaas adag oo qaali ah.
Xaqiiji in biyaha dhexmaraya buuxiyaha dheriga ay yihiin kuwo dabiici ah, nadaafad iyo caafimaad u leh qoysaskaaga, Heerka qulqulka sare ayaa ku siinaya inaad si dhaqso leh u buuxiso dheryaha ama digsiyada.
Kaydi booska jikadaada
Qashinkaan wax lagu buuxiyo ee dheriga ganacsiga wuxuu leeyahay labo waab oo lagu xakameynayo socodka socodka, labalaab oo isku dhafan ayaa gaaraya ilaa 23.8 ″, ka dibna wuxuu ka laabayaa wadada markii aan la isticmaalin.
Waxqabadka Sare ee Neoperl Aerator
Dhex-dhexaadiyaha neoperl aerator, wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo dhaqid oo raaxo leh, nozzles caag ah oo nadiif ah ayaa ka hortaga dhisitaanka biyaha adag
Heerka socodka biyaha oo sarreeya
Si dhakhso ah u buuxi dheriyada ama digsiyada waaweyn.
SKU: 2311100G Categories: Qubeyska jikada, Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada
Hal Dalool Dalabka Buurta
5-sano damaanad xaddidan